सपनामा पानी या नदी देख्नुभयो, राम्रो की नराम्रो? – Jagaran Nepal
सपनामा पानी या नदी देख्नुभयो, राम्रो की नराम्रो?
तपाइँ हामीले सपना देखिरहेका नै हुन्छौँ । तर सपना देखिएका कुराहरुका अर्थ के हो भन्ने बारेमा जानेका हुँदैनौँ ।आज हामी तपाइँलाई सपनामा पानी देख्दा शुभ कि अशुभ भन्ने बारेमा जानकारी गराउँछौँ ।
सपनामा नदी देख्नु
यदि तपाइँले सपनामा नदी देख्नु भयो भने तपाइँका अधुरा सपना पुरा हुँदैछन् भन्ने बुझ्नु सकिन्छ।
सपनामा बाढी आएको देख्नु
यदि सपनामा बाढी आएको बेलाको पानी देख्नुभयो भने सावधान हुनुपर्छ । किनभने त्यसको मतलव छिटै नै तपाईको जीवनमा नराम्रो अवस्था आउने संकेतका रुपमा फलादेश गरिन्छ ।एजेन्सीको सहयोगमा
यो पनि फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालका कारण यसरी आउदै छ सम्बधमा फाटो !!
श्रीमान् र श्रीमती घरभित्र भएर पनि बोलचाल हुँदैन किन ? एउटै शयन कक्षमा भएर पनि आपसमा भलाकुसारी हुँदैन किन ? एउटै ओछ्यानमा भएर पनि अन्तरङ्ग क्षण साटिरहेका हुँदैनन् किन ?
किनभने उनीहरूबीचमा अहिले घुस्रिएको छ, सामाजिक सञ्जाल । अर्थात् फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि । जब उनीहरू सामाजिक सञ्जालभित्र प्रवेश गर्छन्, आफ्ना पार्टनर भुल्छन् । फेसबुक, ट्विटरमा एकोहोरिन्छन् ।
जब दम्पतीबीच सम्वाद हुन छाड्छ वा सम्वादको वातावरण बिथोलिन्छ, तब स-साना असमझदारी बढ्छ । स-साना समस्याहरूको जन्म हुन्छ । त्यही सानो कुरा बिस्तारै हुर्कन्छ । यस्तो अवस्था आउँछ कि त्यसले श्रीमान्-श्रीमतीबीच शंका–उपशंका पैदा हुन्छ । त्यसपछि एकअर्कामा असमझदारी बढ्छ । मनमुटाव हुन्छ। ठाकठुक पर्छ ।
तपाईंलाई लाग्दो हो, जाबो फेसबुक चलाउँदैमा त्यस्तो हुन्छ र ?
निश्चय पनि फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम चलाउँदैमा त्यस्तो हुँदैन । तर जड त्यही हो । जब तपाईंको लगाव सामाजिक सञ्जालमा बढ्न थाल्छ, तपाईं भर्चुअल संसारमा हराउन थाल्नुहुन्छ। नयाँ-नयाँ सम्बन्ध स्थापित हुन थाल्छ । नयाँ साथी-सर्कलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ भने तपाईं वास्तविक धरातलमा रहन सक्नुहुन्न ।
घर व्यवहार के भइरहेको छ, बच्चाहरूको अवस्था के छ, विद्यालयमा के भइरहेको छ, बुबाआमाको स्वास्थ्यस्थिति के छ, विद्युत वा पानीको बिल बुझाइयो वा बुझाइएन यावत् कुरामा गडबडी हुन थाल्छ । यसै कुराले बिस्तारै तपाईंको पारिवारिक जीवनलाई गाँठो पार्दै लान्छ । अन्तमा एउटा जालोमा फसाइदिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हामी यति धेरै लिप्त हुन थालेका छौं कि पारिवारिक मूल्य र मान्यताहरू ओझेल पर्न थालेका छन्।सामाजिक सञ्जालमा लिप्त भइरहँदा दम्पतीबीचको सम्वाद टुटेको छ। स्वभावैले मानिसलाई रमाइलो गर्न मन लाग्छ । हातमा स्मार्टफोन हुँदा र फेसबुक चलाइरहँदा घरायसी कुरा गर्न कसरी जाँगर चल्छ ?